आज सबैभन्दा चम्किलो देखिने छ मंगलग्रह, कसरी हेर्ने ? - Vishwanews.com
आज सबैभन्दा चम्किलो देखिने छ मंगलग्रह, कसरी हेर्ने ?
काठमाडौं । अन्तरिक्षसम्बन्धी अध्येताहरुका लागि आज विशेष दिन हो । आज मंगल ग्रह र पृथ्वी आमने सामने हुनेछन् । यसले पृथ्वीबाट मंगलग्रह निकै ठूलो र चम्किलो समेत देखिनेछ । आज जीएमटी २३ः२० मा मंगल, पृथ्वी र सूर्य तीनवटै ग्रह १८० डिग्रीको कोण अर्थात् सीधा लाइनमा रहने अमेरिकी अन्तरीक्ष निकाय नासाले उल्लेख गरेको छ । यस्तो संयोग हरेक २६ महिनामा एक पटक जुट्ने गर्छ ।
पृथ्वी र मंगल ग्रह नजिक हुँदा चन्द्रमाकै आधारमा यो ग्रह देखिने छैन । तर, राती आकासमा हेर्दा अन्य ताराहरुको तुलनामा मंगल ग्रह बली बढि चम्किलो र ठूलो देखिने छ । आज सुर्यास्त हुनासाथ आकाशमा मंगल ग्रह रातो र चम्किलो स्पष्टसँग देखिने खगोलशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले यो अवसरलाई अध्ययन अनुसन्धानका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन । हरेक दुई वर्षमा मंगल ग्रह र पृथ्वी नजिक हुने मौका पारेरै मंगल ग्रहमा जाने मिसन यही मौका पारेर पठाउने गरिन्छ । यसबाट कम समयमै मंगलग्रहसम्म एक्सेस प्राप्त हुनेछ ।